चर्चित मोडल अनितालाइ थुप्रै प्रेम प्रस्ताव आउँछ रे तर उनि यसो भन्छिन | onlineharpal.com
चर्चित मोडल अनितालाइ थुप्रै प्रेम प्रस्ताव आउँछ रे तर उनि यसो भन्छिन
on: ४ बैशाख २०७४, सोमबार २०:३४ In: bignews1, अन्तर्वाता
नेपाली मोडलिङ क्षेत्रमा छोटो समय मै निकै चर्चा कमाउन सफल मोडलिङ अकासकी एक उदाउदो ताराको नाम हो अनिता बस्नेत उनि यो क्षेत्रमा आउन निकै संघर्ष गर्नु परेको बताउँछिन। उनलाई थुप्रै प्रेम प्रस्ताब आउँछ रे तर उनि त्यता चासो राख्दिनन रे, उनलाई फुलहरुमा राष्ट्रिय फुल लाली गुराँस मन पर्छ रे र फलफुल मध्ये अंगुर मन पराउछिन र उनको सबै भन्दा मनपर्ने ठाउँ पोखरा हो आउनुहोस उनै मोडल अनिता बस्नेतसंग हाम्रो अनलाइन हरपल डटकम को सम्बादाताले लिएको ताजा र रमाइलो कुराकानी हेरौ।
– धेरै धेरै नमस्ते र अनलाइन हरपल डटकम हेरेर बसिरहनु भएका दर्शक स्रोतहरुमा म कलाकार अनिता बस्नेतको तर्फबाट न्यानो अविबदन र फेरिपनि स्वीकार्नुहोस नमस्कार।
अहिलेत निकै व्यस्त हुनुहुन्छ खास केमा बिजी हुनुहुन्छ ?
– त्यै हो कामै अब सांगीतिक कोसेलीहरु लिएर आउँछु म्युजिक भिडियो र स्पेसल्ली अहिले चै प्रोग्रामहरुमा व्यस्त छु।
स्टेज प्रोग्रामहरु नि गर्नु हुन्छ है ?
– हजुर एकदम गर्छु।
यो मोडलिङ क्षेत्रमा प्रबेस गर्नु भाछ अहिले निकै चर्चित हुनुहुन्छ नि यसमा के भन्नु हुन्छ ?
– म आफुलाई चै त्यति धेरै चर्चित भाछु जस्तो लाग्दैन जस्तै अब दर्शकहरुको रेस्पोन्स उनहरुले चै चर्चित हुनुहुन्छ तपाई भन्नु हुन्छ तर जति मैले सोचेको छु त्यति धेरै चर्चित चै भाछुइन।
तपाईले जतिपनि म्युजिक भिडियो भिडियोहरु गर्नु भाछ ति सबै उत्कृष्ट छ र दर्शक स्रोताहरुले पनि उत्कृष्ट मानेका छन् यो अभिनय कला चै कताबाट सिक्नु भयो ?
-मैले अभिनय भनेर त्यस्तो स्पेसल अभिनय चै सिकिन जेहोस मलाइ चै सोनो देखि नै सांगीतिक क्षेत्रमा इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो बच्चा देखिनै म एनामा हेर्ने नाच्ने टिभी हेरेर एकटिङ् कपि गर्ने यस्तो यस्तो गर्थे र पछी एस एल सी दिए पछि चै ग्यपिङ् भयो दुइ चार महिना त्यो समयमा चै मैले डान्स क्लासहरु लिए र मेरो एकटिङ्लाइ अझ सुधार्नु मैले एकटिङ् क्लास लिने चै सोची राखेको छु।
तपाईले यो मोडलिङ क्षेत्र नै किन रोज्नु भयो ?
– मोडलिङ क्षेत्र भन्ने बितिकै अलिकति गीत संगीत रमाइलो इन्ट्रेस्ट त सबैलाई नै हुन्छ रहर सबैलाई नै हुन्छ रहर लाग्दो फिल्ड हो। यो मेरो बच्चा देखिकै इन्ट्रेस्ट हो र मैले अध्ययन पनि जोर्नालिस्ट गरेको हो र अरनिको टेलिभिजनमा हेलो कलिउड प्रोग्राम पनि चलाए काभ्रे धुलिखेलमा जोर्नालिस्ट र आर्टिस्ट भनेको त एउटा नङ र मासुको जस्तै सम्बन्ध हुन्छ र कमसेकम म जोर्नालिस्ट भए भने मेडियामा त हुन्छु जस्तो लाग्थ्यो पहिला देखि तेसैले मैले मेडियालाइ नै समातेर हिडेको हो।
अब अलिकति प्रसंग बदलौ अलि रमाइलो बिषय तिर जाउँ तपाईलाइ कुन समय मन पर्छ बेलुकीको गोधुली साँझ वा बिहानको उसा ?
-मलाइ बिहानको स्वच्छ हावा अनि अलिअलि मिर्मिरे उज्यालो यस्तोमा उठेर घुम्नलाइ चै एकदम मन पर्छ।
तपाईले यो बिहानको अलि अलि मिर्मिरे उज्यालो मन पर्छ भन्नु भयो यसमा केहि बिशेस कारण छ ?
-स्पेसल त्यस्तो कारण त छैन तै पनि एउटा गाउँमा त भाले बसेको आवाज हुन्छ यहाँ त गाडीको आवाज आउँछ र उठिन्छ र उठेर हिड्दा मनमा आनन्द आउछ।
आफुलाई सबै भन्दा मन पर्ने ठाउँहरुमा कुन पर्छ ?
-मलाई सबै भन्दा मन परेको ठाउँ पोखरा एकदम मन पर्यो र मुस्ताङ मलाइ एकदम जाने रहर छ त्यहाँ सिनहरु हेर्दा फोटोहरु हेर्दा एकदम जान मन छ मन पर्छ।
पोखरा कुन कुन ठाउँ घुम्नु भयो ?
-फेवाताल, बाराही मन्दिर, सारंङकोट
पोखराको सबै भन्दा मनपर्ने ठाउँ चै कुन लग्यो ?
-सारंङकोट, सारंङकोटको डाडाबाट प्याराग्लाडिङ् गर्नुको छुटै मजा छ।
मानिसको जीवनमा सुख र दुख त आइनै हाल्छ तपाईसंग भएको सुखको र दुखको क्षण भए बताई दिनुन ?
– म धेरै सुखपाको मानिस पनि हैन दुख पनि धेरै भोगेको छुइन मैले जेहोस एक चोटी सुटिङ्को लागि गोर्खा गाको थिएँ गोर्खा मान्बु जन्म भुमिको सुटिङ्मा सबैले मनपनि पराइ दिनु भयो एकदम टिपिकल गीत त्यसको सुटिङ्को क्रममा जाँदाखेरि पाँच घण्टा माथि उकालो धादिंगबाट हिनेर गाको थियौ हामी त्यो हिंडेर गएर अनि भुकम्प पछिको तहस नहस गोर्खा सबै जस्ताको छानाहरुमा बस्ने त्यहाँ पाँच घण्टा हिडेर सुटिङ पनि गर्दै गएर सकेर फर्केको क्षण चै म कहिल्यै बिर्सिन सक्दिन त्यो अविष्मरणीत सुखको दुखको दुवै क्षण हो।
तपाइलाइ सबै भन्दा मन पर्ने फुल कुन हो ?
– मलाइ एकदम लाली गुराँस मन पर्छ यो हाम्रो राष्ट्रिय फुल पनि हो।
नेपालको कलाकार मध्ये यहाँलाइ सबै भन्दा मनपर्ने को हो ?
राजेश हमालको कुन कुराले यहाँलाइ तान्यो ?
– उहाँको पर्सनालिटी अभिनय सबै कुरा एकदम मन पर्छ।
फलफुल मध्ये कुन चै सबै भन्दा मिठो लाग्छ ?
– मलाइ अंगुर सबै भन्दा मिठो लाग्छ।
खाने कुरा मध्ये के धेरै मन पर्छ ?
– मलाइ मम: मन पर्छ मलाइ चिन्ने जति सबैले मलाइ खाने कुरा अडर गर्दा मम: नै गर्नु हुन्छ।
अब फेरि यतै फर्कौ मोडलिङ तिरै यो क्षेत्रमा प्रबेस गरेर मानिसले जीवन गुजारा गर्न सक्छ ?
– मैले चै अहिले सम्म चलाई राखेको छु। यहाँ स्ट्रगल गर्न सक्नु पर्छ धेरै कुरा सिकेर आउनु पर्छ र मिहनत, परिश्रम र स्ट्रगल गर्न सके अबस्ये हुन्छ।
मतलब मोडलिङ क्षेत्रमा पनि भविष्य छ ?
– भबिष्य छ उदाहरणको लागी धेरै सिनियर कलाकारहरु हुनुहुन्छ उहाँहरु पनि जीरहनु भाछ।
तपाई त यो क्षेत्रमा निकै लामो समय जमी सक्नु भयो अब आउने न्यु कमरहरुलाई के सुझाब दिनु हुन्छ ?
– सबै कुरामा पर्फेक्ट भएर मात्र आउनुहोस यसमा भबिष्य छ।
कलाकारहरुलाई प्राय राजनीतिबाट अलि पृथक रहन्छन भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ नि यसमा के भन्नु हुन्छ ?
– म राजनीतिमा त्यति चासो पनि राख्दिन र नेपालको राजनीति सलुट गर्ने खालको पनि छैन मलाइ त्यता इन्ट्रेस्ट छैन ।
राजनीति भनेकोत सबैले जान्नु पर्छ बुझ्नु पर्छ भन्छन र सबै समाज विकास परिवर्तन सबै राजनीतिबाट नै हुन्छ नि ?
– यसमा राज्यले कलाकारको निम्ति केहि गरेकै छैन कलाकारको लागि केहि छुट्याएकै छैन पछि राज्यले केहि गर्यो भने राजनीतिमा लाग्न नि सकिन्छ।
तपाईले कसैसंग प्रेम गर्नु भाछ ?
– प्रेम त गरिन्छ नर्मल्ली जो कोहिसंग पनि प्रेम गरिन्छ मतलब आफ्नो मान्छे देखि लिएर आमाबाबा दाजुभाई सबैसंग प्रेम पनि धेरै किसिमको हुन्छ तर स्पेसल प्रेम भनेर म कोहिसंग जीवन विताउँछु भनेर चै गरेको छुइन स्पेसल कोहि पनि छैन।
प्रेम चै केहो जस्तो लाग्छ यहाँलाइ ?
– प्रेम मानिसको एक अर्काको परिपुरक माध्यम पनि हो प्रेम भन्ने बितिकै नेगेटिभ सोच्नु पर्ने डराउनु पर्ने कारण छैन माया भनेको मानिसको बाँच्ने आधार हो।
प्रेम प्रस्ताब आउछ ?
कति आउछ ?
त्यस्तो काउण्टिङ् त छैन आइरहन्छ ।
यसमा केहि सोच्नु भा छैन ?
– यसमा मैले सिरियस नलिएर पनि होला लव गर्दा टाइम छुट्याउनु पनि गारो हुन्छ कोहिसंग रिलेसनमा हुदा अरुको देखेर पनि दिक्क लागेर आउछ उसको अडरमा चल्नु पर्ने यता उता त्यस्तो मलाई मन पर्दैन।
आफ्नो भविष्यको राजकुमार चै कस्तोहोस् जस्तो लाग्छ ?
– त्यो त अब सबै कुराले पर्फेक्ट मलाइ बुझ्ने मेरो फिल्डलाइ बुझ्ने तैहो।
अब कति समयमा म्यारिज गर्ने विचार गर्नु भाछ ?
– त्यसको बारेमा सोचेको छुइन जेहोस टाइम आए पछि थाहाहुन्छ।
अन्त्यमा हाम्रो खबर कोसेली डटकम मार्फत आफ्नो दर्शक श्रोताहरुलाइ के सन्देश दिनु हुन्छ ?
– सर्बप्रथम त अनलाइन हरपल डटकम हेरेर बस्नु भाको सम्पूर्ण दर्शकहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु यतिन्जेल मेरो कुराकानीलाइ मिठो नमिठो जे मानेर हेरिरहनु भाछ फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कतिपयले मलाइ चिन्नु भाछ कति पयले चिन्नु हुन्न म त्यति धेरै जमेको कलाकार पनि हैन। एउटा स्ट्रगल गरिरहेको कलाकार हुँ।
म म्युजिक भिडियोहरु गर्छु मुभीहरु पनि गर्छु भर्खरै मात्र काल रिलिज भएको छ लै बारी लै पनि रिलिज कै क्रममा छ यहाँहरुले हेरी दिनु होला माया गरि दिनु होला म टिपिकल लोक गित र आधुनिक गीतहरुको भिडियो गर्छु यहाँहरुले हेर्नु भएको छ भने आगामी दिनहरुमा पनि हेरी दिनु होला माया गरि दिनु होला हेर्नु भएको छैन भने युटुबमा गएर अनिता बस्नेत सर्च गरेर हेरिदिनु होला माया गरि दिनु होला तै भन्न चाहन्छु।